Keychains Factory - China Keychains Vagadziri uye Vatengesi
Keychains & Key Rings zvipo zvakanaka zvinogona kushandiswa zvakanyanya kushambadza, kusimudzira, premium souvenir uye kuunganidza, Ndiyo imwe yenzira inoshanda yekuwedzera BRAND kuoneka. Pretty Shiny Gifts inopa yakazara yakazara yeakatsika Keychains & Key Rings, inogona kugadzirwa neBrass, Iron, zinc alloy kana simbi & acrylic, simbi inosanganiswa neganda, zvakare sirivheri sterling zvakare sarudzo yekukwirira kwekupedzisira kudikanwa. Iyo logo inogona kugadzirwa yakatsetseka HAPA kuchenesa uye zvakare inogona kuitwa neakanyanya kurerukirwa kutaridzika uye kwemukati kutemwa, akasiyana mavara anowanikwa: yakajairwa PMS kara, yakajeka girazi, glitter ruvara, kupenya mune rakasviba ruvara uye zvakare tembiricha inonzwika ruvara, nezvimwe. Kunyangwe zvii zvekusimudzira macheni & Makiyi zvindori zvauri kutsvaga, Pretty Shiny Zvipo zvinokugutsa iwe! Taura nesu pasales@sjjgifts.com izvozvi kuti utore tsika yako wega maChaatchain & Key Rings.
Simbi Yakavakirwa Acrylic Spinning Keychains
Aluminium Piritsi Nyaya neKiyi
China Factory Bhodhoro opener Ornament Mercedes B ...
Yakadhindwa Pasina Ruvara Keychains
Zinc chiwanikwa Keychains
Kanda Pewter Keychains
Trolley yesimbi Keychains